Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Shiinaha » Universal Beijing Resort ayaa maanta u furan dadweynaha
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Shiinaha • dhaqanka • Entertainment • Films • Warshadaha Warshadaha • Investments • News • Dadka • jiga • Parks Theme • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Iyada oo ah mashruuc weyn oo maalgashi shisheeye ah oo ka jira warshadaha adeegga ee Beijing, hudheelka ayaa la filayaa inuu kor u qaado aasaaska Beijing oo ah xarun adeegsiga caalamiga ah iyo xoojinta kalsoonida dhaqanka Shiinaha iyo warshadaha dalxiiska iyada oo uu jiro cudurka COVID-19.
The Universal Beijing Resort, oo hadda ah tan ugu baaxadda weyn adduunka, ayaa dadweynaha loo furay Isniintii.
Meesha loo dalxiis tago, oo dhererkeedu yahay 4 km oo isku wareeg ah, waxaa ku jira beerta dulucda Universal Studios Beijing, Universal CityWalk, iyo laba huteel.
Waxaa jira 37 tas -hiilaad madadaalo iyo meelaha soo jiidashada leh, iyo sidoo kale 24 bandhig madadaalo.
Xarunta Caalamiga ah ee ugu weyn ee Universal Resort ayaa dadweynaha laga furay Isniintii Degmada Tongzhou ee Beijing, halkaas oo ay fadhido Xarunta Maamulka Dawladda Hoose ee Beijing.
The Universal Beijing Resort, oo hadda ah tan ugu baaxadda weyn adduunka oo dhan, waa beerta shanaad ee Universal Studios theme global, the third in Asia, and the first in China.
Meesha loo dalxiis tago, oo dhererkeedu yahay 4 km oo isku wareeg ah, waxaa ku jira beerta dulucda Universal Studios Beijing, Universal CityWalk, iyo laba huteel. Waxay ballanqaadaysaa inay dalxiisayaasha siin doonto waayo -aragnimo booqasho oo qoto -dheer, oo leh toddobo dhul oo mowduuc leh oo daboolaya 37 tas -hiilaad madadaalo iyo soojiidasho taariikhi ah, iyo sidoo kale 24 bandhigyo madadaalo ah.
Furitaanka ee Universal Beijing Resort waxay ku soo beegantay fasaxa Festifaalka Mid-Dayrta ee sannadkan oo soconaya 19ka Sebtember ilaa 21ka Sebtember.
Ku tiirsanaanta Guryaha Caqli-yaqaanka ah ee dunida sida Transformers, Minions, Harry Potter iyo Jurassic World, Universal Beijing Resort ayaa soo jiitay tobanaan kun oo dalxiisayaal ah intii hawlgal tijaabo ah horraantii September.
Toddobada dhul ee mawduuca leh, Kung Fu Panda Land of Wesomeness, Transformers Metrobase iyo WaterWorld ayaa si gaar ah loogu diyaariyey dalxiisayaasha Shiinaha.
“Dhismuhu wuxuu qaatay kaliya laba sano iyo bar. Adeegsiga tikniyoolajiyadda dhammaadka sare ee Shiinaha ayaa si weyn u gaabiyey muddada dhismaha, ”ayuu yiri Wang Tayi, maamulaha guud ee Beijing International Resort Co., Ltd.
Dabayaaqadii 1990 -meeyadii, Beijing waxay sahaminaysay horumarka kala duwan ee warshadaha dalxiiska, halka shirkadda Maraykanka ee Universal Parks & Resorts ay iyaduna raadinaysay fursado ay ku gasho suuqa Shiinaha.
Horaantii 2001, dawladda hoose ee Beijing iyo dhinaca Maraykanka ayaa wada -xaajood ka yeeshay dhismaha mashruuca Universal Resort ee Beijing. Bishii Oktoobar ee sannadkaas, waxay saxiixeen warqad ujeeddadiisu tahay iskaashiga.
Ka dib markii mashruuca la ansixiyay 2014, Beijing International Resort Co., Ltd., oo ah iskaashi China-US ah oo leh lahaanshaha goobta, ayaa la aasaasay bishii Diseembar 2017. Dhismaha Universal Beijing Resort ayaa si rasmi ah u bilowday July 2018.
Sida laga soo xigtay Yang Lei, oo ah ku xigeenka madaxa degmada Tongzhou ee Beijing, maalgashiga dhismaha hoteelku wuxuu ka badnaa 35 bilyan yuan (qiyaastii 5.4 bilyan oo doolar).
Markii ugu sarreysay dhismaha mashruuca bishii Luulyo 2020, waxaa jiray ilaa 36,000 oo shaqaale ah oo u tartamayay waqti si ay u hubiyaan dhisidda habsami leh iyada oo uu jiro cudurka COVID-19.
Dhismaha dhismayaasha waawayn ee Universal Beijing Resort ayaa la dhammaystiray waqtigii loogu talagalay 2020. Xaruntani waxay bilowday tijaabooyin walaac bishii Juun 2021 waxayna bilaabatay hawlgal tijaabo ah 1 -dii Sebtember oo si rasmi ah loo furay dadweynaha 20 -kii Sebtember.